Pentagon-ka ayaa Jimcihii sheegay in ciidamadii ugu badnaa ee Mareykan ah ay kala baxayaan Soomaaliya ka dib amar ka soo baxay Madaxweyne Donald Trump, oo doorashadii madaxtinimo ka dib sii wada inuu riixo yareynta ka qeybgalka Mareykanka ee howlgallada argagixiso la dirirka ee dalalka shisheeye.
Iyadoo aan bixin faahfaahin, Pentagon-ka ayaa qoraal kooban ku sheegay in "inta badan" ciidamada iyo hantida Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya la soo bixin doono horaanta sanadka 2021-ka. Waxaa jira ilaa 700 oo askari oo ku sugan Soomaaliya, kuwaasi oo tababara lana taliya ciidamada Soomaaliya ee qeybta ka ah dagaalka ka dhanka ah kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ee gacan-saarka la leh ururka Al-Qaacidda.
Trump ayaa dhowaan amar ku bixiyay dhimista ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq, waxaana la filayay in uu qaar ama dhammaanba ciidamadiisa kala baxo Soomaaliya.
Jen. Mark Milley, oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Mareykanka ayaa Arbacadii sheegay in ay wali jirto dood ku saabsan qaab-dhismeedka mustaqbalka ee joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya.
Iyadoo ay ku xiran tahay hadba tirada ciidamada Mareykanka ee sii jooga Soomaaliya marka uu xafiiska la wareego 20-ka bisha January, Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa beddeli kara go’aanka yareynta ciidamada ee Trump, ama waxa uu sameyn karaa isbedello kale oo ka tarjumaya mudnaantiisa la-dagaallanka argagixisada. Milatariga Mareykanka ayaa saldhig ku leh dalka dariska ah ee Jabuuti ee dhaca marinka Bab al-Mandab.​
Fal-celinta ka dhalatay go’aankan
Xildhibaan Jim Langevin, oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Rhode Island, ayaa dhaleeceeyay ciidama ka soo saarista Trump ee Soomaaliya oo uu ku sheegay in ay tahay "isku dhiibidda al-Qaacidda iyo haddiyadda Shiinaha." Langevin ayaa ah gudoomiyaha Guddi-hoosaadka Sirdoonka ee Aqalka Wakiillada Mareykanka.
"Markii ciidamada Mareykanka ay ka baxaan Soomaaliya iyagoo ka jawaabaya amarka maanta, way ku adkaaneysaa diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha gargaarka in ay dadka ka caawiyaan xallinta khilaafaadka, iyadoo aan wax rabsho ah ama dhimasho aysan dhicin,” ayuu yiri Langevin.
“Xilli ay Soomaaliya galeyso doorasho, islamarkaana ay colaad ka taagan tahay dalka deriska ah ee Ethiopia, dayacaadda saaxibadeen ma imaan karin waqti ka xun,” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo xubin ka ah Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u sheegay Reuters in “go'aanka Mareykanku uu uga soo saarayo ciidamadiisa Soomaaliya marxaladdan adag ee dagaalka lagula jiro al-Shabaab iyo shabakaddooda argagixisada caalamiga ah ay tahay mid aad looga xumaado,".
"Ciidamada Mareykanka waxa ay sameeyeen waxqabad aad u weyn, waxayna saameyn weyn ku yeesheen tababarka iyo waxtarka howlgalka ee ciidamada Soomaaliyeed," ayuu yiri Yuusuf.
Haddii ka bixista ciidamada Mareykanka uu tahay mid joogto ah, "waxa ay saameyn weyn ku yeelan doontaa dadaallada la-dagaallanka argagixisada," ayuu yiri Kol. Axmed Cabdullaahi Sheikh, oo soo noqday taliyaha ciidamada Danab muddo saddex sano ah.
Waxa uu sheegay in uu ka barbar dagaallamay ciidamada Mareykanka, iyadoo intii uu taliyaha ahaana labo Mareykan ah iyo in ka badan boqol askari oo ciidankiisa ah ay dhinteen.
Barnaamijka Mareykanka ee lagu gaarsiinayo tirada ciidamada Danab ilaa 3,000 oo askari ayay ahayd in uu sii socdo illaa 2027-ka, ayuu yiri Sheikh, laakiin mustaqbalka arrintaasi ayaan hadda caddeyn.
Ciidamada Mareykanka ayaa ku sugnaa Soomaaliya, inta badanna waxa ay taageeraan howlgallada ciidamada gaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaan Danab ee ka dhanka ah Al Shabaab, oo weerarrada ay ka gaysatay wadamada sida Kenya iyo Uganda ay ku dhinteen boqollaal rayid ah oo ay ku jiraan Mareykan.